सुरक्षा परिषद् सचिवालय : मन नपरेकालाई थन्काउने थलो !
३ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धिरु बस्न्यातको १७ वैशाखमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, सिंहदरबारमा सरुवा भयो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दरबन्दी भएको ठाउँमा थन्काएपछि एआईजी बस्न्यात असन्तुष्ट देखिए ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सिंहदरबारमा हाजिर हुने वित्तिकै बस्न्यात १५ दिन विदा बसे । आखिर उनी किन सिंहदरबार पठाइए ? प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बस्न्यातले प्रहरी प्रतिष्ठानमा आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न नसकेको उजुरी परेको थियो । तर, अनुसन्धान गरेर दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्नेमा उनलाई सरक्क सुरक्षा परिषद्मा पन्छाइयो ।
डीआईजी शेरबहादुर बस्नेत विमानस्थल प्रहरी सुरक्षा कार्यालय प्रमुख रहेका बेला गत कात्तिकमा सरकारले आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीमा उनीभन्दा जुनियर डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई प्रमुख बनायो । कार्यालयको प्रकृति अनुसार आफूभन्दा जुनियर अधिकृतलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएपछि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाए । अन्ततः उनलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा खटाइयो ।
सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा थन्काइएका एआईजी बस्न्यात र डीआईजी बस्नेत दुवैको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसँग सुमधुर सम्बन्ध थिएन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्ध बिग्रिएका अधिकृतहरुलाई थन्काउने थलो बनाइएको यो पहिलो पटक होइन । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी भएका वेला एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बाँकी कार्यकाल यही बिताएका थिए । उनलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सुरक्षा परिषद्मा थन्काइएको थियो ।
‘बाहिर रहेका प्रहरी अधिकृतहरु अवकाश पाउने बेला विभिन्न कारणले काठमाडौं आउन चाहन्छन्’, एक पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘त्यसका लागि पनि परिषद् उपयुक्त थलो बनेको छ ।’
सशस्त्र प्रहरीमा पनि तत्कालिन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसँगको सम्बन्धलाई ‘सुमधुर’ बनाउन नसकेका डीआईजी रवि थापालाई कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि एसएसपीबाट बढुवामा पछाडि पारिएको भनिन्छ । वन्तपछि आईजीपी बनेका सिंहबहादुर श्रेष्ठले थापालाई डीआईजी बनाएपनि बाँकी ११ महिने कार्यकाल सुरक्षा परिषद्मै बिताउन पठाइयो ।
अरु देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई महत्वपूर्ण निकाय मानिएपनि नेपालमा फौजी संगठनका नेतृत्वसँग असन्तुष्ट अधिकृतहरु थन्क्याउने थलो बनाइएको छ । ‘बाहिर जे अभ्यास भएपनि हामी कहाँ सुरक्षा परिषद्लाई राम्रो काम गर्न नसक्ने वा मन नपरेकाहरुलाई थन्काउने जगेडा निकाय बनाइएको छ’, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।